Best European Train ụzọ gasị | Save A Train
Home > Travel Europe > Best European Train ụzọ gasị
(Emelitere ikpeazụ On: 28/08/2020)
Ozugbo ị na-na na ahụmahụ nkasi obi, na mma na general ebube nke ụgbọ okporo ígwè njem, ọ bụ a siri ike laghachi ndụ tupu-okporo ígwè. Karịsịa mgbe anyị na-ekwu okwu banyere Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị ke ndaeyo. A Afrika juru na sinik ụzọ gasị, ịrịba ama Okirikiri ala na a njuputa nke ịrịba ebe ka gawk na.
Train njem bụ nnọọ ihe kasị ebe mara mma agbaga na ala ụzọ iji nweta gburugburu Europe, na e nwere ụfọdụ ụzọ gasị ga ezi ịfụ uche gị, karịsịa n'oge Summer!
Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị: Zụlite des Pignes, France
The Eurostar na ndị ọzọ na ụgbọ okporo ígwè e ịme ọzọ Ugboro ọrụ. na hotels welcome ọbịa anya-elu udu. E nwere dị ebube anwụ na-acha ụbọchị mgbe i nwere ike inwe a ọṅụṅụ na ọbụna a nri n'èzí.
Chọpụta a onwe ụgbọ okporo ígwè, na-aga na kasị mara mma n'ógbè ke France. Provence bụ ma ama n'ihi na ya ọdịdị na ọmarịcha Okirikiri, njem bụ n'ezie a ezi echiche, na-emekwa otu n'ime Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị na-! On its way the ụgbọ okporo ígwè na-aga osimiri, àkwà mmiri, obere ọmarịcha obodo dị ka St Andre les Alpes na Entrevaux ruo mgbe njedebe ikpeazụ ya - Digne les Bains - isi obodo Alpes-de-Haute-Provence mpaghara.
Nsoro: Nice-Digne les Bains
Duration: 3 awa, 145 km
Mgbe na-aga: spring, n'oge okpomọkụ, ịda
Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị: The West Rhine Railway, Germany
The Rhine abụghị naanị otu n'ime Europe kasị mara mma osimiri, ma ọ bụ na-otu nke Afrika kasị mkpa waterways. Ọ na-aga ụfọdụ 1,320 Kilomita site Switzerland ụzọ niile na Netherlands na North Oké Osimiri. Otu n'ime ndị kasị adọrọ adọrọ ngalaba nke a dike osimiri na-aga site na Germany si Middle Rhine Valley (Rheintal), mpaghara pụtara ìhè eke mara mma. N'ezie, gbatia nke osimiri inyịme si Mannheim na ndịda Koblenz na n'ebe ugwu obụrede mbụre mma ka ikpọ na a nnukwu ngalaba, kwuru na dị ka Rhine akpiri (Rheinschlucht), e ẹkedọhọde a UNESCO World Heritage Site.
Ekele ya ọtụtụ castles na akụkọ ihe mere eme na obodo nta, a gbatia nke Rhine nwere ọtụtụ narị afọ na-enwe mmetụta na-ese, dere, na-arọ, na bụ na-otu nke Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị n'oge okpomọkụ oge.
Traingbọ ahụ na-aga n'akụkụ osimiri Rhine ma kpughee ebe ndị ahụ mara mma nke Germany. The nkume mkpọda na ubi-vine, ochie castles n'elu ha - ị nwere ike nweta kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè na nleta kpara Lorelei rock na St. Goarshausen, nke adahade 120 m n'elu Rhine. A n'ezie dị mma na-aga, mgbe ejegharị ejegharị na ndị a mara mma German obodo.
Mgbe na-aga: n'oge okpomọkụ, ịda
Cologne na Bonn Ụgbọ oloko
Bonn na Koblenz Ụgbọ oloko
Koblenz na Bingen Ụgbọ oloko
Bingen na Frankfurt Ụgbọ oloko
The Rauma Railway, Norway
The Rauma Railway-aghọ ndị ọzọ na-ewu ewu n'etiti njem nleta, dị ka ọ na-aghọ otu n'ime Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị na spring. A njem a ụgbọ okporo ígwè na-ewetara gị nso ikpọ uwa n'etiti Andalsnes na Dombas.
The njem n'etiti Dombas na Andalsnes bụ 114 km ogologo na-ewe 1 hour na 40 nkeji. The ụgbọ okporo ígwè na-aga 32 àkwà mmiri – gụnyere ma ama Kylling Bridge, 59 mita n'elu Rauma osimiri – na-agabiga 6 tunnels. The ụgbọ okporo ígwè nwere nnukwu windows, ikwe gị ịdabere azụ na-enwe ebube mma. The ụgbọ okporo ígwè na-aga n'oge gara aga na a ma ama Trollveggen – na Troll mgbidi, Europe kasị elu perpendicular ugwu mgbidi.
Spring bụ oge kacha mma na-amalite na-aga. The ụgbọ okporo ígwè na-agba karịsịa ngwa ngwa site na ebe ndị mara mma. Ọ na-akwụsị maka foto na Kylling Bridge na site Troll mgbidi, a na ndu ga-enye gị ozi site na ndị ọkà okwu, na ị ga-enweta a broshuọ na ihe ọmụma banyere ihe ndị pụtara ìhè nke njem.
Mgbe na-aga: Summer
Bernina Express, Switzerland ka Italy
Ịgafe Alps na Bernina Express na-bụ otu n'ime Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị ileta Europe! N'ụzọ, na Bernina Express apụta Hollywood-style n'elu 65 mita-elu Landwasser Viaduct, na mbinye aka Ọdịdị nke ahụ Rhaetian Railway na UNESCO World Heritage saịtị.
Kpam kpam na ụgbọ okporo ígwè na-aga site na 55 tunnels na n'elu 196 àkwà mmiri ya ụzọ site Chur ka Tirano. Njem na-emeso ka ebube nlegharị anya n'oge ha njem, dị ka Montebello usoro na a echiche nke Bernina massif, na Morteratsch glasia, atọ ọdọ mmiri lej Pitschen, Lej Nair na White Lake, na Alp Grum na Brusio okirikiri Viaduct. ke ndaeyo, na njem nwere ike ike ịgbatị si Tirano ka Lugano n'ụgbọ ahụ Bernina Express Bus.
Duration: 4 awa, 123 km
Chur ka Thusis Ụgbọ oloko
Zurich ka Chur Ụgbọ oloko
Geneva ka Chur Ụgbọ oloko
Milan ka Tirano Ụgbọ oloko
Njikere mmiri n'ime Best European ụgbọ okporo ụzọ gasị? Save A Train pụrụ inyere gị aka, na ngwa na mfe ntinye akwụkwọ na NO zoro ezo ụgwọ! Gịnị a ikuku!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-european-train-routes/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#scenictravel europetravel longtrainjourneys summerholidays ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ
Top Yoga mgbaba Na Europe ma na-E Site Train